Warar - Hordhac u xaarid jillaabasho loogu talagalay awoodda dabaysha
Hordhac Hawo qaadista loogu talagalay tamarta dabaysha
Dhalinta midabkawaxaa sidoo kale loo yaqaan dhalista ujawaab, oo si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha loona yaqaan "wadajirka mashiinka". Waa qayb muhiim ah oo gudbinta oo lagama maarmaan u ah mashiin u baahan dhaqdhaqaaq wareegsan oo u dhexeeya laba shay, laakiin sidoo kale u baahan inuu qaado xoog axial ah, xoog shucaac ah, iyo daqiiqad foorasho isla waqtigaas.
The Dhalinta midabka waa qaybta ugu muhiimsan ee marawaxadaha dabaysha, Qaadista mashiinka marawaxadaha dabaysha waxaa loo isticmaalaa sidii culeys saaid ah oo ballaaran, kaas oo inta badan loo isticmaalo garoonka iyo nidaamka yaw: qaadista garoonka waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro giraangirta iyo daab, iyo qaadid qaadidwaxaa loo isticmaalaa Isku-xidhka munaaradda iyo cutubka. Dabaysha qulqulaya ee dabaysha ayaa aad u adag in la dayactiro iyadoo ay ugu wacan tahay xajmigeeda ballaaran iyo meesha rakibidda oo adag; marka lagu daro, jawiga shaqada ee isbeddelka shaqada ee dabaysha, qaybtu way adag tahay in la raro, waana mid aad u adag in la kala furfuro lana ilaaliyo, taasoo keentay kharashka dayactirka oo ka sarreeya. Intaa waxaa sii dheer, mar haddii dhalmada dhuuban ay guul darreysato, waxay si toos ah u saameyn doontaa waxqabadka shaqada ee marawaxadaha dabaysha, waxayna xitaa sababi doontaa xiritaanka.
Marawaxadaha dabaysha ee xilligan badiyaa korsada a kubad laba-saf ah oo afar-geesood leh kubbad taabasho qaab-dhismeedka si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee xawaaraha dabaylaha kala duwan ee xagalka daabka. Sanadihii la soo dhaafay, dhibaatooyinka isku halaynta ee ay sababeen kororka fudud oo edeb darrada ah ee dhererka daabku xitaa lagama hor tagi karo soo saarayaasha qalabka guud ee warshadaha. Fashilka xejiska garoonka ayaa soo muuqday, taas oo dhib ku noqotay dhammaan warshadaha gudaha iyo dibedda, warshaduna waxay u baahan tahay inay milicsato.
Maalgashiga tamarta dabayshu waa maalgashi khatar sare leh, iyo xisaabinta soo noqoshada iyo xaddiga celinta waxay ku saleysan tahay kalsoonida. Haddii dhibaato dhalista diliddu dhacdo inta lagu jiro wareegga nolosha oo dhan, sida xilliyada shaqada, beddelka, iyo xitaa dhacdooyinka nabadgelyada, waa natiijada kuwa horumariya iyo soosaarayaasha martigelinta aysan rabin inay arkaan.Xuzhou Wanda Slewing dhalista waxaa ka go'an tayo sare iyo xasilooni sareynta dhalashada dhalashada, waxayna heshay amaan la isku raacsanyahay qadka warshadaha. Si loo helo xarriiqyo xasiloon oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay marawaxadaha dabaysha ayaa ah dabagal aan kala go 'lahayn oo uu ku dhaqmayo xirfadle kastaWanda. Waa mas'uuliyaddeena aan la dhaafi karin si aan u yareyno halista guuldarrada iyo xakamaynta khasaaraha dhaqaale iyo khataraha nabadgelyada.